ဒါဇင်ပလပ်စ် အဖွဲ့ဧ။် (၁၅)ကြိမ်မြောက် အလှူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဒါဇင်ပလပ်စ် အဖွဲ့ဧ။် (၁၅)ကြိမ်မြောက် အလှူ
Posted by etone on Oct 7, 2013 in Community & Society, Education, News, Science & Religion, Short Story | 13 comments
ဒါဇင်ပလပ်စ်အဖွဲ့ ဧ။် (၁၅)ကြိမ်မြောက် အောက်တိုဘာလအလှူအဖြစ် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၊ တောင်ဒဂုံမြိနယ်ရှိ ၊ ၀ိဇယဒါယီ သီလရှင်သင် ပညာရေးကျောင်းသို့ စာရေးကိရိယာ ၉၅,၀၀၀ကျပ်ဖိုးနှင့် အလှူငွေ ၁၆၇,၀၀၀ကျပ်သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ရာ ၊ ကျောင်းတိုင် သီလရှင် ဒေါ်အစ္ဆရိယဥာဏီက လက်ခံခဲ့ပါတယ် ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စတည် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အနီးနားရှိ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းတစ်ခုဧ။် တွဲဘက်အဖြစ် စတင်ခဲ့ရာမှ ၊ သီလရှင်စာသင်တိုက်အဖြစ် သီးသန့်ခွဲတည်ထောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ သူငယ်တန်းမှ အဌမတန်းထိ ပညာသင်ပေးလျှက်ရှိပါတယ် ။ ကျောင်းသား ဦးရေ စုစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့် ရှိတယ်လို့လည်း သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား အဖြစ် လူဦးရေ ၈၀ကျော်ခန့်ရှိပြီး ၊ အုပ်ထိန်းရ အဆင်ပြေစေရန် သီလရှင်ဝတ်ဖြင့်သာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားအဖြစ် လက်ခံကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား စာသင်သား အများစုမှာ တိုင်းရင်းသူများနှင့် အနီးနား ရပ်ကွက်များမှ နွမ်းပါးသူများဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပြီး ၊ စာရေးကိရိယာနှင့် ပုံနှိပ်စာအုပ်များကို သီလရှင်ကျောင်းမှ ထောက်ပံ့ပေးနေကြောင်းလည်း သိရပါတယ် ။ ဆရာလေးတစ်ပါး အပါဝင် ဆရာမ အင်အား ၆ယောက်ရှိပြီး ၊ မူလတန်းပြများအတွက် တလလျှင် (၃၅,၀၀၀ကျပ်)နှင့် အလယ်တန်းပြများအတွက် တလလျှင် (၄၅,၀၀၀ကျပ်)အဖြစ် လစာပေးကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။
ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား စာသင်သား သီလရှင်များအတွက် ဆွမ်းကပ်လိုလျှင်လည်း အောက်ပါ နှုန်းထားအတိုင်း လှူဒါန်းနိုင်ပြီး ကျောင်းမှာ တာဝန်ယူ ချက်ပြုတ်ပေးကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။
အာရုံဆွမ်း – ၈၀,၀၀၀ကျပ် မှ ၁၀၀,၀၀၀ကျပ်
နေ့ဆွမ်း – ၁၅၀,၀၀၀ကျပ်မှ ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် (ဟင်းအမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကွာခြားပါတယ်)
The Voice ဂျာနယ်မှာပါတဲ့ ဆောင်းပါး တပုဒ်နှင့် ပူးတွဲ ဓါတ်ပုံ တချို့ကြောင့် ၊ ၄င်းကျောင်းကို သွားရောက်လှူဒါန်းဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ် ။ လက်ရှိစာသင်ကျောင်းအနေထားမှာ ပုံထဲကအတိုင်းရှိနေသော်လည်း ၊ ဆောက်လုပ်လက်စ ကျောင်းဆောင် အသစ်ကိုလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါးကြောင့် ၊ အလှူရှင်များ တိုးလာပြီး ၊ ခြံကပ်လျှက်မြေတကွက်(သိန်း၁၆၀၀န်းကျင်ခန့်) ကို ကျောင်းဆောက်ဖို့ ၀ယ်လှူဒါန်းသွားကြောင်းလည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။ ထိုမြေကွက်ပေါ်တွင်လည်း စာသင်ဆောင်များ ဆောက်ပြီး ၊ စာသင်သား ပိုလက်ခံနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ့် အကြောင်းလည်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ် ။
မုဒိတ္တာပွားစရာ သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ Mandalay Gazette အွန်လိုင်းစာရေးသူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ် ၊ Dozen Plus ရဲ့ လစဉ် အလှူရှင်လည်း ဖြစ်တဲ့ ကိုရဲစည်က အသစ်ထပ်ဆောက်မယ့် ကျောင်းဆောင်သစ်အတွက် ၊ အိမ်မိုးသွပ် အချပ်(၁၀၀) လှူဒါန်းမယ်လို့လည်း သိခဲ့ရပါတယ် ။
၀ိဇယဒါယီ သီလရှင်သင် ပညာရေးကျောင်းသို့ကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုပါလျှင် ကျောင်းတိုင်သီလရှင် ဒေါ်အစ္ဆရိယဥာဏ (ဖုန်း – 0943092558) ဓါတ်နန်းလမ်း ၊ ရွာသာကြီး သို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ် ။
စာရေးကိရိယာ ၉၅,၀၀၀ကျပ်ဖိုး + အလှူငွေ ၁၆၇,၀၀၀ကျပ်
အချောကိုင်ရန် ကျန်ရှိနေသော ဆောက်လုပ်လက်စ ကျောင်းဆောင်သစ်
တကယ့်ကိုလိုအပ်ချက်များနေတဲ့ကျောင်းလေးကိုး။ အဲလို လှုဒါန်းတဲ့အတွက် သာဓုပါ။
တကယ်လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို..ကူညီတာကမှ ကူညီခြင်းအစစ်မို့ …
တကယ်လိုအပ်တဲ့ကွက်လပ်တွေ..လိုက်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ ..ဒီအဖွဲ့ ရဲ့စေတနာတွေ ကို…
Dozen Plus ရဲ့ လစဉ် အလှူ ရှင် ရွာသူသားများရဲ့
သွပ်ပြားလှူရသော အကျိုးကြောင့် ငါ့ မောင်လေး မူးပိန်မဲတစ်ယောက် သွပ်ပြားလိုဖြစ်
ကိုယ်ယောင်ကိုယ်ဝါ တွေ သွပ်ပြားပေါ် နေရောင်ထိုးသကဲ့သို့ မက်စိကျိန်းစပ်နေအောင် တောက်ပြောင်နိုင်ပါစေ။
ကယွဲစည်က သဒ္ဓါပေါက်လျှင် အိုက်ဂလိုထထ လှူတာ မမဆွိရဲ့ ….. ။
မဆောက်သေးတဲ့ မြေကွက်လပ်မှာ ထပ်ဆောက်မယ့် အဆောင်သစ်တွက် ခုကတည်းက ကြိုလှူထားတာ … ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ် …. ဆရာလေးက ဆောက်မယ်ဆိုလျှင် သူ့ကို ဆက်သွယ်ပြီးသွပ်လာချပေးရုံပဲ … ။
ခက်စ်တာက .. ကယွဲစည်မှာ ဖုန်းဆယ်လုံးလောက်ကို တလတလုံးနှုန်းနဲ့ ကိုင်သုံးဒါ ဆိုတော့…. ခိခိခိ …
သာဓု သာဓု သာဓုပါ..
ဒါဇင်ပလပ်အဖွဲ့ကြီး နောင်မျိုးဆက်များအထိ လက်ဆင့်ကမ်း ရှင်သန်နိုင်ပါစေလို့ ……..
အလှူကို ကိုယ်တိုင်မလိုက်ရတာကြားတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်
Dozen Plus ရဲ့အလှူအတန်းတွေကို
လစဉ် တွေ့မြင် နေရတာ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်…
မနိုရေ …. လူကိုယ်တိုင်အမြဲ မလိုက်နိုင်ပေမယ့် အမြဲတမ်းလစဉ် အလှူငွေတွေ ထည့်ပြီး လှူဒါန်းနေတာကတောင် ကျေနပ်စရာပါ ။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ် ။ ဒါဇင်ပလပ်စ်က လစဉ်သွားတယ်ဆိုပေမယ့် အမြဲ လူစုံတက်ဆုံ မဟုတ်ပဲ အဆင်ပြေတဲ့ လူလောက်သာ ကိုယ်တိုင် လိုက်လှူဖြစ်တာမျိုးပါ ။
ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီ အိရေ …. ၊ အထိမ်းမှတ်နေ့လေးအတွက် လှူဒါန်းမယ်ဆို ဆက်သွယ်ပေးပါ အလှူငွေ လက်ခံပေးပါမယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
ဒီလအလှူလေးကို တစ်အားလိုက်ချင်တာ နှိပ်စက်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကြောင့် မလိုက်ဖစ်လိုက်ဖူး
နောက်လ လိုက်နိုင်အောင် လုပ်မှပဲ ပျက်ကွက်နေတာကြာပီ …
သာဓုခေါ်မလို့လာတာ အတင်းပြောတဲ့လူနဲ့တိုးနေတယ်။ ကုသိုလ်စိတ်လေးတောင် ပျက်သွားတယ်။
သာဓုပါတော် သာဓုပါတော် သာဓုပါတော်။
လှူ နိုင်တဲ့လူတွေကိုရော၊ ကရိကထခံ အချိန်ပေးလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုရော အားကျလေးစားပါတယ် မအိတုန်ရေ။